politika manokana - NYE Countdown ho Djs, Vjs, Nightclubs 2019
Tahaka ny ankamaroan'ny mpandraharaha ao amin'ny tranonkala, NYECountdown, llc, ("NYECOUNTDOWN, LLC"), dia manangona ny fampahalalana tsy miankina manokana momba ny karazana tranonkala sy server izay ampiasaina amin'ny ankapobeny, toy ny karazana navigateur, preferences amin'ny fiteny, tranonkala mifandraika ary daty sy ora nanaovana ny fangatahan'ny mpitsidika tsirairay. NYECOUNTDOWN, ny tanjon'ny LLC amin'ny fanangonana ny fampahalalana tsy miankina manokana dia ny hahatakatra bebe kokoa ny fomba ampiasain'ireo mpitsidika NYECOUNTDOWN, ny tranonkala. Indraindray, ny NYECOUNTDOWN, LLC dia afaka mamoaka vaovao tsy voamarina manokana ao amin'ny vondrona, ohatra, amin'ny famoahana tatitra momba ny fironana amin'ny fampiasana ny tranonkala. NYECOUNTDOWN, LLC koa dia manangona ny fampahalalana manokana manokana toy ny Internet Protocol (IP) ho an'ny mpampiasa sy ny mpampiasa mametraka fanehoan-kevitra ao amin'ny bolongana WordPress.com. NYECOUNTDOWN, LLC dia mamoaka ny fampidirana mpampiasa sy mpaneho hevitra amin'ny adiresy IP amin'ny toe-javatra mitovy amin'izay ampiasainy sy manambara ny fampahalalam-baovao manokana araka izay voafaritra etsy ambany, afa-tsy ny mombamomba ny mpiblôgy mpamaky ny blaogy sy ny adiresy mailaka dia hita sy ny mombamomba ireo mpitantana ny bilaogy mbola tsy nisy ny fanehoan-kevitra.
Fanangonana fanazavana manokana
Ny mpitsidika sasany ao amin'ny tranonkala NYECOUNTDOWN, LLC dia misafidy ny hifanerasera amin'ny NYECOUNTDOWN, LLC amin'ny fomba izay ilàna ny NYECOUNTDOWN, LLC mba hanangonana vaovao manokana. Ny habetsaky ny karazana fampahalalana izay mamory ny NYECOUNTDOWN, LLC dia miankina amin'ny toetoetry ny fifandraisana. Ny olona na ny orinasa dia mety afaka mandray anjara amin'ny fifampiraharahana amin'ny NYECOUNTDOWN, LLC dia nangatahana hanome fampahalalana fanampiny, ao anatin'izany raha ilaina ny fampahalalana manokana sy ara-bola takiana amin'ny fanatanterahana ireo fifanakalozana ireo. Amin'ny tranga tsirairay, ny NYECOUNTDOWN, LLC dia manangona izany fampahalalana izany raha tsy araka izay ilaina na mifanentana amin'ny fanatanterahana ny tanjon'ny fifanakalozan'ny vahiny amin'ny NYECOUNTDOWN, LLC. NYECOUNTDOWN, LLC dia tsy manazava ny vaovao miseho manokana fa tsy ny voalaza etsy ambany. Ary ny mpitsidika dia afaka mandà hatrany ny fampahafantarana manokana ny vaovao, miaraka amin'ny fampitandremana izay mety hisakana azy ireo tsy handray anjara amin'ny hetsika sasany mifandraika amin'ny tranokala. Raha jerena ny habaka iraisan'ireo tranokalan'ny mpandraharaha, ny mombamomba ny olona dia mety ho hitan'ny olona any ivelan'ny firenena misy anao, anisan'izany ireo olona any amin'ny firenena fa ny lalàna sy ny fitsipika momba ny tsiambaratelo momba ny tsiambaratelom-panjakana dia tsy mahomby amin'ny fiantohana fiarovana tsara amin'ny fampahalalam-baovao toy izany. Raha tsy azonao antoka raha mifanohitra amin'ny fitsipika mifehy ny zon'ny olo-manan-kaja ity fitsipika tsy miankina ity, dia tsy tokony omena ny mombamomba anao. Raha monina ao anatin'ny Vondrona Eoropeana ianao, dia tokony mariho fa hampiely any Etazonia ny fampahalalana anao, izay heverin'ny Firaisambe Eoropeana ho fiarovana ny angona angona. Na izany aza, mifanaraka amin'ny lalàna ao an-toerana izay mampihatra ny Didim-panjakana Eoropeana 95 / 46 / EC an'ny 24 1995 Oktobra ("Directive privé d'EU privé") momba ny fiarovana ny tsirairay mikasika ny fanitsiana ny angon-drakitra manokana sy ny hetsika maimaim-poana toy izany, olona any amin'ny firenena ivelan'ny Etazonia Amerikana izay manolotra ny mombamomba azy manokana dia manaiky izany amin'ny fampiasana ankapobeny ny fampahalalana tahaka izay omena ao anatin'ity Politika ity sy ny famindrana azy any Etazonia.
Ireo Accounts Subscriber
Ireo mpandray anjara dia ampirisihina, saingy tsy takiana, hiditra ny vaovao momba ny tenany, izay azo jerena miaraka amin'ny kaontiny. Amin'izao fotoana izao isika dia hiseho ao anatin'ny tambajotran'ny Subscriber, ny "Nickname" ary ny tanàna misy anao. Raha tsy tianao ny manana ny fampahalalana misy ny toerana misy anao dia aza miditra ao rehefa mameno ny fampahalalana ny fangatahanao.
Ny fiainan'ny ankizy
NYECOUNTDOWN, LLC dia manolo-tena hiaro ny tsiambaratelon'ny ankizy, indrindra fa ireo ao amin'ny 13. Amin'ny maha-NYECOUNTDOWN toy izany, ny LLC dia mandrisika ny ray aman-dreny sy ny mpiambina mba handray anjara mavitrika amin'ny zanapeo na ny ankizy amin'ny Internet sy ny fahalianany. NYECOUNTDOWN, LLC dia tsy manangona vaovao avy amin'ireo tsy ampy taona. Ankoatra izany, ny NYECOUNTDOWN, LLC dia tsy mifantoka amin'ny toerana ho an'ny ankizy.
Fifandraisana amin'ny tranonkala tsy misy mpizara
Ny tranonkala dia mety ahitana rohy mankany amin'ny tranonkala hafa na toerana misy ny sasany mety ampiasain'ny NYECOUNTDOWN, LLC na ny mpiara-miasa aminy, ary ny hafa miasa amin'ny olon-kafa. Ireo rohy ireo dia tsotra fotsiny ho anao. Tsy namerina ny fampahalalana amin'ny tranonkala hafa izahay. Tsy tompon'andraikitra amin'ny votoatin'ny tranonkala hafa na vokatra na serivisy izay mety atolotra amin'ny tranonkala hafa isika. Tokony hampihatra tsara àry ianao rehefa mampiasa vohikala hafa, toy ny ataonao amin'ny loza mety hitranga. NYECOUNTDOWN, LLC dia mandrisika anao handinika ny politikan'ny fiainana manokana momba ny tranonkala alohan'ny handefasana ny mombamomba anao manokana.
NYECOUNTDOWN, LLC dia mampiasa PayPal, Inc. ho mpiasan'ny orinasam-bola tranainy. NYECOUNTDOWN, LLC dia tsy mitahiry amin'ny fotoana rehetra, ny fampahafantarana bola rehetra hividianana na hikojàna ny Sampan-draharahany. Noho izany, ny NYECOUNTDOWN, LLC dia manilika ny andraikitra rehetra amin'ny fampahalalam-bola.
NYECOUNTDOWN, LLC dia mampiasa ny Google Analytics mba hahazoana ny fampahalalana tsy fantatra anarana avy amin'ny mpampiasa azy ary mety hanangona antontan'isa mikasika ny fitondran'ny mpitsidika ao amin'ny tranonkala. NYECOUNTDOWN, LLC dia afaka maneho ampahibemaso ampahibemaso na manome izany amin'ny hafa. Na izany aza, ny NYECOUNTDOWN, LLC dia tsy mamoaka ny vaovao miseho manokana fa tsy ny voalaza etsy ambany.
Fiarovana ny mombamomba ny tena manokana-mamantatra ny fampahalalana
NYECOUNTDOWN, LLC dia manambara ny fampahalalana manokana sy ny famantarana manokana manokana ho an'ireo mpiasa ao aminy, mpiantoka ary fikambanana mifandraika amin'izany:
• Ilaina ny mahafantatra izany fampahalalana izany mba handraisana azy amin'ny anaran'ny NYECOUNTDOWN, LLC na manome tolotra izay hita ao amin'ny tranokala NYECOUNTDOWN, LLC, ary
• izay nanaiky tsy hamoaka izany amin'ny hafa.
Ny sasany amin'ireo mpiasa ireo, ireo mpiantoka ary ireo orinasam-pifandraisana dia mety ho any ivelan'ny tanindrazanao; amin'ny fampiasana tranonkala NYECOUNTDOWN, LLC, dia manaiky ny famindrana ny vaovao toy izany ianao. NYECOUNTDOWN, LLC dia tsy hanofa na hivarotra mety ho an'ny olona manokana sy famantarana manokana ho an'ny olona. Ankoatry ny mpiasany, ny orinasa sy ny orinasam-pifandraisana, araka ny voalaza tetsy ambony, ny NYECOUNTDOWN, LLC dia mamoaka ny fampahalalana manokana sy ny famantarana manokana manokana ho valin'ny filankevitra, ny baikon'ny fitsarana na ny fangatahana governemanta hafa, na rehefa mino NYECOUNTDOWN, LLC Ny finoana izay fampahafantarana dia tena ilaina mba hiarovana ny fananana na ny zo an'ny NYECOUNTDOWN, LLC, antoko fahatelo na ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Raha toa ka mpampiasa voasoratra anarana ao amin'ny tranonkala NYECOUNTDOWN, LLC ianao ary nanome ny adiresinao mailaka, NYECOUNTDOWN, LLC dia mety mandefa email anao indraindray mba hilaza aminao momba ireo singa vaovao, mitaky ny fanehoan-kevitrao, na mitazona anao hatrany amin'ny zava-mitranga miaraka amin'i NYECOUNTDOWN, LLC ary ny vokatray. Ampiasainay aloha ny bilaoginay vokatra isan-karazany mba hampitana ity karazana fampahalalana ity, noho izany dia manantena ny hitazona io karazana mailaka io ho farafaharatsiny. Raha mandefa fangatahana izahay (ohatra amin'ny alàlan'ny mailaka fanohanana na amin'ny iray amin'ireo rafitra fanehoan-kevitra ataonareo), dia mametraka ny zo hamoaka izany izahay mba hanampiana anay hanazava na hamaly ny fangatahanao na hanampy anay hanohana ireo mpampiasa hafa. NYECOUNTDOWN, LLC dia mandray ny fepetra rehetra ilaina mba hiarovana amin'ny fampidirana, fampiasana, fanovana na fandringanana ny fampahalalana mety ho an'ny tena manokana sy ny famantarana manokana.
Cookies ary tsy mitaky fangatahana
Ny cookie dia endri-tsoratra fampahalalana izay misy tranokala mitsidika ny ordinateran'ny vahiny, ary ny tranonkalan'ny mpitsidika dia manome ny tranokala isaky ny miverina ny mpitsidika. NYECOUNTDOWN, LLC dia mampiasa cookies hanampiana NYECOUNTDOWN, LLC mamantatra sy manara-maso ireo mpitsidika, ny fampiasana ny tranonkala NYECOUNTDOWN, LLC, ary ny safidiny amin'ny fidirana amin'ny tranonkala. NYECOUNTDOWN, LLC izay tsy te-hanana cookies napetraka ao amin'ny ordinaterany dia tokony hametraka ny navigateur ho fandavana cookies alohan'ny hampiasana ireo tranokala NYECOUNTDOWN, LLC, ary ny tsy fahampian'ny singa sasany amin'ny tranonkala NYECOUNTDOWN, LLC dia mety tsy miasa tsara raha tsy misy ny fanampian'ny cookies. NYECOUNTDOWN, LLC dia tsy hanome voninahitra ny fangatahana.
Raha azo nalaina ny NYECOUNTDOWN, LLC, na ny ankamaroan'ny fananany rehetra, na ny zava-mitranga mety hitranga mety hitranga amin'ny NYECOUNTDOWN, LLC dia tsy miditra amin'ny raharaham-barotra, na miditra amin'ny bankirompitra, ny fampahalalam-baovao dia iray amin'ireo fananana izay nafindra na nahazoan'ny olon-kafa. Miaiky ianao fa mety hitranga ny fifindrana, ary ny mpividy ny NYECOUNTDOWN, LLC dia mety hanohy hampiasa ny fampahalalana manokana momba anao manokana araka ny voalaza ato amin'ity politika ity.
Ny dokambarotra miseho ao amin'ny tranonkalanay dia azo atolotra amin'ireo mpisera avy amin'ny dokambarotra, izay mety mametraka cookies. Ireo cookies dia mamela ny mpizara adiresy hamantatra ny solosainao isaky ny mandefa anao dokambarotra an-tserasera mba hanangonana vaovao momba anao na ireo hafa mampiasa ny ordinateranao. Ity fampahalalana ity dia ahafahan'ny tambajotra an-tserasera manolotra dokam-barotra vitsivitsy izay heveriny fa tena mahaliana anao. Ity Politika ity dia manazava ny fampiasana cookies amin'ny NYECOUNTDOWN, LLC ary tsy manazava ny fampiasana cookies amin'ny dokam-barotra rehetra.
Indraindray, NYECOUNTDOWN, LLC dia afaka mandefa mailaka elektronika, fanambarana, fanadihadiana an-tsoratra (sms) na fampahalalana hafa, na mifandray aminao amin'ny alàlan'ny dingana automatique. Raha tianao ny tsy handraisanao an'ireny fifandraisana ireny, dia azonao atao ny miala amin'ny torolàlana omena ao amin'ny gazetiboky elektronika sy ny filazam-baovao, na mandefa email amin'ny support@nyecountdown.com izay manondro ny faniriana hanongana lisitra na hanafoanana ny data avy amin'ny serivisy NYECOUNTDOWN, LLC. Alefaso ny SMS (sms), valio fotsiny ny "REMOVE".
Politique privé privé
Na dia mety tsy dia lehibe loatra aza ny ankamaroan'ny fanovàna, NYECOUNTDOWN, LLC dia mety manova ny politikan'ny Fahafahana, indraindray, ary amin'ny fomba voafaritra ao NYECOUNTDOWN, LLC. NYECOUNTDOWN, LLC dia mandrisika ny mpitsidika hijery matetika ity pejy ity noho ny fiovana rehetra eo amin'ny politikan'ny fiarovana. Ny fampiasanao tsy tapaka amin'ity tranonkala ity aorian'ny fanovana rehetra ato amin'ity Politika momba ny fiainana an-tserasera ity dia ny fanekenao ny fanovana toy izany.
Disclaimer sy famerana ny adidy
Lalànan'ny Fitondram-panjakana sy ny toerana fivoahana
Io politika momba ny tsiambaratelo io dia tarihin'ny Lalàna mitovy amin'ny Governemanta sy Exclusive, izay hita ao amin'ny fampiharana NYECOUNTDOWN, LLC raha toa ka azo ampiharina ireo fepetra ireo ary ankoatra izay avelan'ny lalàna.